Mpikatroka miaina an-tsesitany, manomboka ny ‘Satan’i Honk Kong 2021,’ vina iray ho an’ny hoavin’ireo hetsika mpandàla ny demaokrasia · Global Voices teny Malagasy
Antenain-dry zareo hisy ny mandatehezana tsy mpiandany eny anivon'ireo am-pielezana
Voadika ny 17 Marsa 2021 8:26 GMT
Mpikatroka 8 nanambara ny fanombohana ny Satan'i Hong Kong 2021 tao amina antsafa virtoaly iray natao hoan'ny gazety. Sary avy amin'ny Stand News.
Ny 15 Martsa 2021 ity lahatsoratra ity no nivoaka voalohany tamin'ny fiteny shinoa tao amin'ny Stand News. Asa fandikàna ity navoakan'ny Global Voices ity, araka ny fifanarahana mifampizàra votoaty.
Ny 14 Martsa dia natomboky ny vondrona iray ahitàna mpikatroka valo avy ao Hong Kong miaina an-tsesitany ny “Satan'i Hong Kong 2021,” lokaloka ho fanohizana ny hetsika mpandàla ny demaokrasia ho an'i Hong Kong sy rafitra iray ho an'ny asa fisoloana vava iraisampirenena.
Nandritra ny antsafa virtoaly ho an'ny gazety, nentanin'i Nathan Law, Ted Hui, Glacier Kwong, Sunny Cheung, Brian Leung, Ray Wong, Baggio Leung, sy Alex Chow ireo mponina avy ao Hong Kong miaina any ivelany mba hifandray amin'ireo hetsika erantany mpandala ny demaokrasia, manohitra ny fihitaran'ny fitondrana tsy refesimandidy.
Fanoherana ireo hetsika farany nataon'i Shina tamin'ny fisamborana ny ankamaroan'ireo mpitarika mpandàla ny demaokrasia sy famerenana manoratra ireo fepetram-pifidianana ao Hong Kong, nantitranterin'ilay vondrona — izay avy amin'ireo hetsika isankarazany mpandàla ny demaokrasia — ny lanjan'ny fananganana mandatehezana tsy mpiandany eny anivon'ireo mponina avy ao Hong Kong miaina any am-pielezana.
Nathan Law, mpanao lalàna nandositra an'i Hong Kong taorian'ny 1 Jolay 2020 nanambaràna fa manankery ilay Lalàna Momba ny Fiarovam-Pirenena, no nanazava ny tanjona amin'ilay Sata 2021 (fitanisàna avy amin'i William Yang tao amin'ny Twitter):
Eto izahay mba hampiseho firaisankina sy hampahery mba tsy ho kivy ireo olona mitolona manohitra ny famoretana ara-pôlitika ataon'ny PCC (antoko kaominista shinoa). Antenainay ihany koa hoe ny vondrompiarahamoninay aty ampitan-dranomasina dia ho afaka hiaro ireo soatoavina fototr'i Hong Kong: demaokrasia, fahalalahana ary ny fitiavanay an'io tanàna io.
Ilay sata dia manomboka amin'ny hoe “ny finoan'ireo teratanin'i Hong Kong monina am-pielezana,” amin'ny fanipihana ny adidin'ireo izay miaina any ampitan-dranomasina:
Ireo teratany avy Hong Kong ka monina any am-pielezana no hilaza izay tsy azo ambara ao Hong Kong amin'izao fotoana izao, amin'ny fampiasàna ilay fahalalahana sarobidy anananay, mba hampitàna ny feon'ireo tampenam-bava amin'ny alàlan'ny fepetran'ny horohoro ao Hong Kong, […] mijoroa anaty firaisankina ary aza mety ho latsaka ao anaty fandriky ny ady an-trano.
Ny toko faharoa dia manisy tsindrimpeo amin'ny endrika tokamiavaky ny maripanondroana ireo teratany avy ao Hong Kong, sy ny zon-dry zareo hanoritra ny hoavy sy ny raharaha ao Hong Kong. Manome toky izy io fa hanohy ny fampahafantarana erantany ho fanafoanana ilay Lalàna tsy mifaditrovana momba ny Fiarovam-pirenena, ary mba hisian'ny rafitra tena demaokratika tokoa ao Hong Kong, tsy ambany vahohon'i Shina.
Ny toko fahatelo dia mamaritra ny fanafoanana ny “jadon'antoko tokana” ao Shina, dingana iray tena ilaina amin'ny fanatanterahana sy demaokrasia sy ny fahalalahana. Manome toky ihany koa ilay hetsika iraisampirenena mpandala ny demaokrasia ao Hong Kong fa hanatevina laharana ireo hetsika hafa manohitra ny tsy refesimandidy nomerika, ny fanadiovana kolontsaina ary ny fandripahana ataon'ny PCC any Mongolia Afovoany, Tibet, Xinjiang, ary ataony amin'ireo foko hafa vitsy an'isa, hatramin'ireo fandemena ara-tafika ataony amin'i Taiwan.
Ao anatin'ny toko farany, milaza izy io fa hampifandray mavitrika ny demaokraisa, ny fahalalahana ary ireo mpisolovavan'ny rariny ara-tsosialy sy tontolo iainana manerana ny tany ilay hetsik'i Hong Kong mba hampiroboroboana ny soatoavina erantany momba ny fahalalahana, ny fizakantena, ny tsy fiangàrana, ny fahasamihafàna, ny fitoviana ary ny demaokrasia hanoherana ireo fitondràna tsy refesimandidy.
Niatrika fanamby i Nathan Law tamin'ny fananganana firaisankina teny anivon'ireo teratanin'i Hong Kong any am-pielezana, araka ny nohazavainy nandritra ilay fihaonambe:
Samihafa ireo avy ao Hong Kong any am-pielezana, ny sasany nandao an'i Hong Kong taorian'ny 1989, ny sasany taorian'ireo hetsipanoherana 2014 ary ny sasany taorian'ireo hetsipanoherana tamin'ny 2019. Ny sasany nandany ron-doha nanangana vondrompiarahamonina, ny hafa tamin'ny fanaovana fandresendahatra pôlitika, ny sasany niasa tamin'ny sehatry ny fandraharahàna. Samy manana ny nofinofiny ireny karazan'olona rehetra ireny momba izay tolona hatao amin'ny hoavy ao Hong Kong.
Notsindrian'ireo valo tomponkevitra tamin'io fa tena ain-dehibe ny firaisankina ho fanohanana ny hetsika demaokratika, ary ilay Sata dia afaka manome vina iraisana ho an'ireo maniry ny hanohy ny tolona avy any am-pitan-dranomasina.
Glacier Kwong, mpikatroka iray mafana fo monina ao Alemaina, nanasongadina ny hoe tsy hijanona fotsiny ao Hong Kong ny politikam-pamoretana ataon'i PCC, ary nanantena izy fa ny fanentanana iraisampirenena hatao amin'ny hoavy dia afaka hampifandray ireo tolona mpandala demaokrasia any amin'ireo firenena hafa.
Fomba fijery tahaka izany ihany koa ny an'i Brain Leung izay mianatra siansa pôlitika any Etazonia amin'izao fotoana izao :
Nandritra ireo hetsipanoherana tamin'ny 2019, nangatahan'ireo olona ao Hong Kong izao tontolo izao mba hihaino ny feon-dry zareo. Ankehitriny, tsy maintsy mifampiresaka amin'izao tontolo izo isika ary mamantatra ny zavatra manodidina ireo tolona any amin'ny faritra hafa eto an-tany.
Milaza i Leung fa, ato anation'ny 10 hatramin'ny 20 taona, ny fandaharam-potoana goavana indrindra ho an'ny hetsika mpandàla demaokrasia ao Hong Kong dia ny fifandraisana amin'ireo fiarahamonina sivily erantany, ny mitady aingampanahy avy amin'ny tsirairay, ary ny mandray anjara amin'ny fandrafetana ny politika any amin'ireo firenena hafa.
Alex Chow, izay mianatra ny jeografia an-tanandehibe any Etazonia, milaza fa ireo teratany avy ao Hong Kong monina any am-pitan-dranomasina dia tsy maintsy mirotsaka an-tsehatra amin'ny tolona erantany, isan'izany ny rariny ara-tontolo iainana sy ny zon'olombelona, ary tsy maintsy mandresy lahatra ireo firenena hafa mba hanova ny fifandraisana ara-diplaomatika amin'i Shina. Lazainy fa ho zavadoza ny tantaran'i Hong Kong raha mbola hanohy ela ny tolony ny vahoaka:
Ireo teratany avy ao Hong Kong, na ireo monina any ivelany na ireo ao anatiny, dia afaka tsy miraharaha izay endrika tantara soratan'ny fanjakana, fa ho solon'izany dia afaka mandray an-tànana hanoratra ny tantaran-dry zareo manokana.